Le yindlela iApple ekhusele ngayo iimfihlo zesoftware yayo le WWDC 2021 | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 10/06/2021 18:00 | Izaziso, WWDC 2021
Ukuvuza okukhulu kwemveliso kunye isoftware yeapile zezinye zeendawo ezibuthathaka zenkampani. Ayisiyoye-Apple kuphela eyingxaki kodwa kuzo zonke iinkampani ezineemveliso eziphantsi kwenqanaba eliphezulu lokufihla ukunqanda ukuvuza kwazo zonke iintlobo. Inguqulelo epheleleyo ye-iOS 14 evulekileyo kunyaka ophelileyo etyhila izinto ezintle kwaye ekugqibeleni zatyhilwa eWWDC. Nangona kunjalo, Kulo nyaka kwi-WWDC 2021 sifike sinolwazi oluncinci kwaye saphuhliswa kancinci malunga neendaba ze-iOS kunye ne-iPadOS 15. Oku kunokuba ngenxa yenkqubo entsha esetyenziswa yiApple ukuthintela ukuboniswa kweendaba ngokufikelela kumntu ngamnye.
Le yindlela iApple ekhusele ngayo i-iOS kunye ne-iPadOS 15 yeWWDC 2021
Amakhwenkwe kunye namantombazana e 9to5mac Uhlalutye ikhowudi yemvelaphi ye-beta yokuqala yabaphuhlisi be-iOS 15 njengakwinguqulelo nganye ekhutshwe ngu-Apple. Nangona kunjalo, bafumene i-quirk abangayibonanga ngaphambili. I-Apple enkulu yongeze into eyichazayo eyahlukileyo kwiimpawu ezintsha kwi-iOS nakwi-iPadOS 15. Oko kukuthi, iphakheji nganye yenqaku okanye izinto ezizezinye zibonakaliswe kwimephu yesazisi efikeleleka ngokufikelela okuthintelweyo.
Ukuze ukwazi ukubonisa loo misebenzi ithintelweyo iyimfuneko uneprofayili yomntu ngamnye onokuyivula. Oko kukuthi, imisebenzi ethile ivuliwe kwaye iboniswe xa i-iOS ifumanisa ukuba iprofayile esetyenzisiweyo ichanekile. Ngale ndlela, iApple inakho ukubonelela ngokufikelela kwiindawo ezithile ze-iOS kunye ne-iPadOS kwezinye iinjineli ukufihla eminye imisebenzi akufuneki basebenze kuyo. Oku kusebenza kukodwa kwimisebenzi kwaye kuthintela wonke umntu ekubeni abe nokufikelela kuyo yonke inkqubo entsha yokusebenza.
Ngendlela, oku sele kwenzekile kwihlabathi liphela ngohlaziyo oluvela kwiVenkile ye App ngokuxhomekeke kuhlobo lwe-iOS esinalo nokuba iApple ithathe isigqibo sokuhlaziya olo lwazi. Nangona kunjalo, Umda womsebenzi ufikile kwisoftware ukuze ihlale ngeenjongo zokugcina iindaba zeenkqubo zabo zokusebenza kweyona mfihlo ifihlakeleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Le yindlela iApple ekhusele ngayo iimfihlo zesoftware yayo kule WWDC 2021